Tigraay Keessatti Gargaarsa Dhala Namaa Guddaatu Barbaachiisa: Tokkummaa Mootummotaa
Amajjii 05, 2021
Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhaqqabsiuun foyya'iinsii hangii tokko argamuus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan birookraasii isaa dhala ddoo sanaa rakkisaa ta'u hojjattoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummotaa ibsanii jiru.
Gareen mootummaa fi kan michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjiin Tigraay Kibba Bahaa fi gama Dhiyaa keessa haala jiru ilaalanii jiran.
Waan hubataniis Tigraay keessa hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaan akka jiru garu dhaqqabuuf carraan jiru daangeeffamaa ta'u isaa ti.Kana malees daahannaa, nyaata, bishaan. qulqullina namaa fi naannoo akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu ibsan.
Dhaabbattonii tajaajiila eegumsa fayyaa magaalaaleegurguddaa keessatti hanga tokko qofa kan hojjatan yoo ta'u waan isaan barbaachisu hin qaban.Kanamalees hojjattonni eeguumsa fayyaa hin jiran.Waaltaaleen fayyaa kanneen maagaaloota gurguddaan ala jiran immoo gonkumaa hojjachaa hin jiran jedhan.
Wal waraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeffameen uummanni kuma 200 fi kumnii 22 achuuma Tigraay keessatti manaa fi qe'ee ofii irraa godaanee jira.Lakkoobsii kun kanneen wal waraansii ituu hin jalqabamiin godaanan kuma 100 hin dabaluu jedhamee jira.
Tokkummaan Mootummootaa akka jedhutti guutuummaa Tigraay keessatti hojjattonni gargaarsaas ta'e gargaarsii karaa nagaan akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbanna jedhee jira.
Mariin Hidha Laga Abbayyaa Akka Itti Fufuu Ibsamee Jira
Pirezidaanti Tiraampii fi Joe Biden nama paartii isaanii fulaa bu’ee senetii tahuuf dorgomu deeggaruuf Joorjiyaa jiran
Dhaabii Gargaarsa Addunyaa,Global Alliance ummata Binishaangul Gumuz baqatee gargarsa birria miliyoona tokkotit dhiyaatu kenne jedha
Reeffii Aagituu Gara Biyyaa Geessamuuf
Gaazexeessaan Rooyiters Finfinneetti Hidhamuu Ilaachisee Poolisiin Deebii Kenne